पहाडको बाजे (कबिता) - Aaha Sanchar
मिति: २०७७ आश्विन ३, शनिबार
२०७५ कार्तिक १६, शुक्रबार १२:०२
झुल्किदा घाम बिहानी देउराली पाखाँमा ।
कति रमाईलो महशुस हुन्छ यो मनमा ।
तर अस्ताउनै लागेको घामजस्तो भएका छन् अरे ।
नौ दशक काटेका एक्लो पहाडको बाजे ।
एैआँ एैआँ भन्दै स्वर कमाउदैँ कुरा गरेछन् ।
रमाईला बैँस जोवनका कुराहरु गरेछन् ।
घाँस दाउरा गदैँ चिसो पानी प्यूदैँ गरेको ।
यादहरु आईरहेछन् बाजेका कुराहरुमा ।
गोठाले जीवन बिताएको उकाली ओराली गरेको ।
अपशोच!कस्तो पिँडैपिँडा भएको रहेछ ।
नत उनको पत्नी रहेछिन् उनलाई सघाउने
साथ सहयोग गर्ने अकालमै स्वर्ग पुगेछिन् ।
अप्ठ्यारो रहेछ ठाँउ वस्तीको माथि एक्लो झुपडी ।
कस्तो पिँडा भएको मलाई भनी गुनासो गरिरहेछन् ।
हे! भगवान कस्तो हो यो जीवन लिला दिएका बरु मलाई स्वर्ग पु¥याएको राम्रो ।
तर बिडम्वना !विवाहित एक्लो छोरो कलकाउदोँ
हुनहार सारा कामहरु गर्न सक्ने आफना जहान
छोराछोरीहरु पाल्ने छोरोलाई पो कालले टिपेछ ।
झनै छोरा गुमाएकाले पहाडको बाजे छटपटाई गरिरहेका छन् ।
कसले पो जानेको छ र यो जीवनको लिला भगवानलाई
धेरै दोष दिन्छन् किन यस्तो दुःख पिँडा वर्षाई दिएको हो भनेर ।
भर्खरकी बुहारी साना साना नातीनातिनाहरु हुकाउने कसरी हो,
कसरी जीवन चलाउने हो भनेर विलाप गर्छिन् बुहारी ।
कस्तो भााग्य तकधिर यस्तो ठुलो पिँडा ठुलो घायल किन बनाउँछ,यो समय ।
हे ईश्वर,फूलजस्तै जीवन काँडा भएर गयो अमूल्य जीवन ।
आज रोईरहेछन् विन्ती गरिरहेछन् पहाडको बाजे ।
मनका पिँडाका वेदनाहरु पोखिरहेछन् । कस्तो
विचित्रको संसार रहेछ भनेर ।
कस्तो संसारमा जनम लिएछ भनेर ।
आशाहरु मरेर गएका छन् सपनाहरु अधुरा भएछन् रे ।
बाँच्नुभन्दा मरेर जानु बेस होला भन्छन रे ।
कठैबरा,भनेर सघाउने कोही छैन पहाडका बाजेका ।
यस्तै यो संसार केही पूरा केही अधुरा सपना मानव जीवनका ।
सिस्ने गाँउपालिका —६, रुकुम (पूर्व
मुख्य समाचार स्थानीय समाचार स्वास्थ्य
फाउण्डेशनद्धारा मास्क र स्यानिटाइजर बितरण
स्कुल जानुपर्छ (कविता)
आहा विचार मुख्य समाचार स्वास्थ्य
अनलाइन परीक्षाको प्रयोग र मेरो अनुभूति
देवी घर्तिको आवाजमा ‘रुने मन’
सामाजिक काममा राजनीतिक बाधा किन ?
यादहरुमा मेरो गाउँ (कबिता)
अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस र यसको सार्थकता
अनलाइनपरीक्षा (1) आत्महत्या (1) आन्दोलन (1) कर्णालीप्रदेश (1) कोरोना (2) गजल (1) गीत (1) चौरजहारी (1) ट्राफिक (1) नेकपा (1) मनाङे (1) मुक्तक (1) रुस (1) रेष्टुरेन्ट (1) लागुऔषध (1) सरकारगठन (2) साक्षरता (1) होमडेलिभरी (1)
२०७७ भाद्र ३०, मंगलवार १७:२१ आहा सञ्चार
२०७७ भाद्र २९, सोमबार १६:२८ आहा सञ्चार
२०७७ भाद्र २८, आईतवार १०:१३ आहा सञ्चार
२०७७ भाद्र २७, शनिबार १४:३२ आहा सञ्चार